Haddii aadan lahayn aqoon elekteroonig ah waxaad su’aalaha ku aaddan ka maqnaashadaada suuqa shaqada uga jawaabi kartaa adigoo buuxinaya foom waraaqo ah: Waqti isu geegeynta ka horreysa nystartsjobb-ka. Foomka waxaa xitaa laga soo qaadan karaa xafiisyadeenna.
Foom: Waqti isu geegeynta ka horreysa nystartsjobb-ka
Marka codsiga shaqabixiyaha iyo jawaabahaaga foomka ee Mina sidor (ama iyagoo ku qoran foom waraaqo ah) ay na soo gaaraan ayaan baaritaan iyo qiimeyn ku sameyneynaa in aad buuxineysid shuruudaha nystartsjobb-ka iyo in kale. Waxaan markaas isku xisaabineynaa waqtiyadaada la oggolyahay ee ka maqnaashada suuqa shaqada. Tusaale waxaa maqnaansho la oggolyahay u ah in aad waddanka ku cusubtahay, in aad Qasnadda Caymiska ka qaadan jirtay lacag bukaan ama aad degmada ka qaadan jirtay kaalmo dhaqaale. Mar walba oo ay sii dheeraato ka maqnaashadaada suuqa shaqaduba waxaa sii badanaysa lacagta uu shaqabixiyuhu kugu helayo.
Waxaad xaq u leedahay mushaarka ku qoran heshiiska wadajirka ah ee shaqabixiyaha. Xitaa haddii shaqabixiyuhu uusan lahayn heshiis wada jir ah waa in aad si u dhiganta heshiiska wada jirka ah mushaar u heshaa.
Xisaabinta waxaan sameyneynaa annagoo ka duuleyna inta aad adigaaga la shaqaaleynayo shaqo la’aan ahayd.